Nhà Thơ Thanh Tịnh Cùng Những Bài Thơ Đặc Sắc Nhất | Anybook.vn - Anybook
Nhà Thơ Thanh Tịnh Cùng Những Bài Thơ Đặc Sắc Nhất | Anybook.vn
milamina fantatra tsy amin’ny maha poety fotsiny fa amin’ny maha mpanoratra tantara an-tsehatra sy mpanao gazety miavaka. Heverina ho mpamorona ny “fomba kabary” izy, mpisava lalana amin’ny fanoratana ” andalan-tsoratra fohy” ary mpanoratra manana tantara an-tsary maro. Miaraka amin’ny penina manan-talenta sy mahaforona azy, dia tian’ny tanora maro ny tononkalony. Noho ny fanoloran-tenany tsy an-kijanona amin’ny asany dia nahazo mari-pankasitrahana maro momba ny literatiora sy ny zavakanto izy
Andeha hotsapaintsika anio ny tononkalony miaraka amin’ny uct.edu.vn!
– Thanh Tinh no tena anarany dia Tran Van Ninh, teraka tamin’ny 12 Desambra 1911 tao Hue. Maty tamin’ny 17 Jolay 1988 tao Hanoi, ny fasana dia eo amin’ny tendrombohitra Thien Thai any andrefan’ny tanànan’i Hue amin’izao fotoana izao. Mpikambana ao amin’ny Antoko Komonista any Vietnam. Mpikambana mpanorina ny Fikambanana Mpanoratra Vietnamiana (1957).
– Mpianatra tao amin’ny Sekoly Penle Ranh (sekoly mahazatra), tao Hue ny Poeta Thanh Tinh taloha, niasa ho mpitari-dalana, nampianatra, fandrefesana tany, niaraka tamin’ny tononkalo natao pirinty tamin’ny Poeta vietnamiana, navoaka tamin’ny 1942. Taorian’ny Fitroarana Jeneraly tamin’ny Aogositra (1945). ), ny Sekretera Jeneralin’ny Fikambanana Kolontsaina Famonjena Nasionaly Foibe dia nanatevin-daharana ny tafika niandraikitra ny tropy Fandresen’ny Tafika. Rehefa teraka ny gazetiboky Military Arts dia filoha lefitra izy ary avy eo dia filoha.
-Taty aoriana dia nitsahatra tsy niasa tamin’ny maha-mpitarika azy intsony izy ary niavaka tamin’ny famoronana. Mpikambana tao amin’ny Komity Mpanatanteraka ny Fikambanan’ny Mpanoratra Vietnamiana izy (fianarana I, II), mpikambana ao amin’ny Fikambanan’ny Literatiora sy ny Zavakanto Vietnamiana. Ny laharan’ny Kolonely ao amin’ny Tafika Vietnamiana alohan’ny hisotro ronono.
– Ankoatra ny tononkalo dia miasa amin’ny hiran’olona, ​​tantara an-tsehatra, ary manoratra gazety koa izy; dia heverina ho mpamorona ny “gadona kabary”, mpitarika amin’ny fanoratana ny “andalana fohy” ary mpanoratra manana tantara an-tsary maro.
– Asa navoaka: Mitady hazo ahitra (tantara fohy, 1943); Tanàna (tantara fohy, 1941); Rahavavy sy rahalahy (tantara fohy, 1942); Xuan sy Sinh (tantara fohy, 1944); Mankahala ny ady (tononkalo, 1937); Hatsembohana (hira tokana, 1954); Tononkalo (tononkalo, 1973); Mandeha eo afovoan’ny vanim-potoanan’ny lotus (tantara tononkalo, 1980); Thanh Tinh Life and Literature (1996).
– Nahazo ny loka Vietnam Arts Association Award (1951-1952) izy noho ny hirany tokana tena tsara.
Poeta malaza ao amin’ny firenena tian’ny mpamaky maro i Thanh Tinh. Nantsoina hoe “penina majika” izy raha nahay tamin’ny sehatry ny zavakanto maro. Ny tononkalony dia mahasarika mpamaky foana amin’ny tantaram-pitiavana tononkira. Andao hiara-hijery sy hahatsapa ny tononkalony!
Amin’ny tolakandro eo amin’ny ahitra fararano tanora,
Ny volana dia hatsatra ary ny masoandro mampandry ny ravina mavo.
Farihy lalina feno ranomaso an’arivony,
Tena manirery ny elk hafahafa eny an-tendrombohitra.
Rahona tongotra misokatra malalaka miandry,
Miantehitra amin’ny elatry ny rivotra ny vorona hanaovana tononkalo.
Kintana iray na roa mamony tsikelikely,
Mandeha mangina ny andro ny alina tato ho ato.
Ny fofon’ny hazo no tsofin’ny rivotra,
Malalaka ny alina, feno rahona ary feno volana.
Tsara sy masira ny mpifanolobodirindrina amiko,
Ny molotra mavokely dia manana tsikitsiky voninkazo foana
Rehefa nifanena tamiko teny an-dalana izy, dia izy
nikiakiaka: “Miverena, azafady.”
Teny an-tsisin-dalana dia nioty felana poara aho
Tampoka teo dia nifanena tamin’ny rahavaviko nitondra vary aho.
Tamin’ny vary no nanasany ahy ho any:
Ity harona boky ity, ity harona ity… poara.
Tiako ny feonao
Feo mazava, tsy manan-tsiny, midradradradra.
Naforitra ilay boky aho, dia nipetra-potsiny nanonofy
Taitra ny niantsoana ny vilany tamin’ny alina.
Nanoratra taratasy fitiavana aho indray andro
Veloma ry rahavaviko any amin’ny renivohitra Imperial.
Miaraka amin’ny takolany rosy dia tonga izy nilaza hoe:
Afaka miteny fotsiny hoe: “Tiako ianao”.
READ Thơ Lý Bạch - những kiệt tác đi cùng năm tháng | Anybook.vn
…Modia, mbola tanora ilay marika
metatra vitsivitsy miala ny tarehiny.
Mifoha ao an-trano, mihira moramora
Afaka mihira moramora ve ianao… hira fandihizana.
Ny olon-dehibe eto dia namana taloha
Tazonina tanana dia veloma
Ny telopolo taona dia fotoana lava, sa tsy izany?
Saingy heveriko fa andro vitsivitsy monja no mifanelanelana
Mikoriana miverina sy miverina ny fahatsiarovan-tena
Mifangaro hafaliana sy alahelo voatenona misavoritaka
Adino koa ny nitomany na nihomehy aloha
Tsarovy fotsiny ny sisin’ny masoandro volamena
Tsy tapitra tampoka ny tantara lava nipetraka
Mahaiza milaza ny fomba manala ny fanaintainana
Volafotsy volo nahagaga bangs roa
Saro-kenatra toy ny fihaonana voalohany
Nirotsaka an-tsaha ny hatsembohana
Ny havoana sy ny tendrombohitra ihany no ambolena vary
Nirotsaka tao an-jaridaina ny hatsembohana
Tsara ravina mulberry maitso landy
Nirotsaka tao amin’ny lagoon ny hatsembohana
Trondro milomano etsy ambany, anana no eo ambony
Hatsembohana, mitombo ny hazo
Mihinàna tsara dia mandresy fa manankarena ny vahoaka.
Sakanana ny tanan’ilay amerikanina, atosika ny lohan’ilay bandy tandrefana
Izay miasa mafy miasa
Ora fiasana bebe kokoa, andro fiasana kely kokoa.)
Menatra toy ny tovovavy iray tao an-tanàna izay vao nankany Kinh
Toy ny fo tanora feno fitiavana,
Very hevitra izy ka nijery mangina
Loko hafahafa sy tsara tarehy an’arivony.
Nampitahainy ny haavony sy ny halaliny,
Toerana manankarena misy tanimbary
Toy ny seho miloko mampitaha azy
Efa masaka ny lokon’ny tanimbary ary feno ny dobo.
Eo amoron’ny farihy amin’ny rano miboiboika
Mijanona ary mipetraha ireo tovovavy matahotra,
Mahafinaritra ny manao sary miaraka ary manao fifaninanana fanasarahana volo
Isao ny confetti mba hanintona ny mpanjakavavy.
Tsy fantany fa marary fo koa izy
Ahinjiro ny tananao ary avadiho moramora ny landy lohataona
Andro rahona, andro feno zavona
Mampalahelo an’ilay zandriny vavy manaiky.
Ary indray andro, raha niverina izy, dia nanontany ny rainy hoe:
Aiza i neny? hainao izay holazaina?
Lazao ahy: Toa reraka aho
Nodimandry i Neny rehefa avy nijaly volana vitsivitsy.
Raha manontany ianao hoe nahoana no foana ny trano?
Manoro hevitra ahy ve ianao hamaly?
Nangina aho, emboka manitra sy setroka fotsiny.
Ary eo am-pandriana ihany discs ny menaka mitafy!
Raha manontany ny paiso mpivady eo anoloan’ny lalantsara ianao
Nahoana no iray ihany ny fakany mitongilana?
Hanondro hazo paiso kely aho
Teo anilan’ny hazo kesika, dia nijanona.
Ny momba ny fasan-dreniny, raha tianao ho fantatra,
Aiza no haleha, lazaiko aminao?
Nanondro mangina ny lanitra manga aho
Ary any an-danitra, ny ahitra ihany no lavitra!
– Ry malala, ahodino moramora ny lamba landy
Miezaha mitady ny tongotry ny rahona setroka manjavozavo
Misy aloky ny fitiavana an’arivony kilaometatra
Soavaly mavokely mandatsaka vovoka amin’ny nofy lavitra
– Mijery ny lanitra sy ny rahona avy lavitra
Rahavavy, mahita hazo hazomalahelo aho.
– Any anaty ala, miangavy anao hijery mangina,
Nandeha soavaly ve ianao?
Noheveriko fa niantso izy
Nineno mafy ilay soavaly nitaingina soavaly.
– Eo anilan’ny ala no mampihorohoro ny hazo ny rivotra,
Ry rahavavy, miantso ando ny sidiniko very.
– Ny anaran’ilay anabavy namafy tamin’ny rivotra tolakandro,
Ianao ve izany, ny feoko miantso?
Eo amin’ny renirano mangina ianao no mijery ilay taratasy?
Ilay olon-tianao ve?
– Milalao amin’ny sambo orkide ny onja mitataovovonana,
Anabavy, miantso an’arivony ny kintana eny amoron-drano…
Oh tsia! Ao amin’ny lanitra atsinanana
Izay soavaly mbola mandehandeha lavitra
– Hey, mangina, mangina
Mavokely ve ny soavaliko?
Hataoko moramora ny lamba,
Natahotra tao anatin’ny zavon’ilay soavaly nilentika izy.
READ "Thơ Khuyên Học" (Nguyễn Khuyến) Tập Thơ Chữ Nôm | Anybook.vn
– Tonga teo amin’ny lasely ilay soavaly mavokely,
Anabavy, ny lasely teo amin’ny soavaly… foana.
Ny onja landy dia mitondra ny sambo ho any amin’ny seranan-tsambo nofinofy,
Nihodina ny lanitra tamin’ireo vahiny tsy manan-kery.
Sambo mihodinkodina am-pitiavana, mihodina sy mamily,
Vahiny miandry lavitra ny morontsiraka.
Sasatry ny sambo tsy misy fiafarany
Avelao ny masoandro hanangona hazo landy eo akaikin’ny fonao.
Nitodika mangina ireo vahiny nijery ny lalana maty
Manenina toy ny rivotra eny amin’ny lanitra?
Ny sambo dia mitsingevana tsy misy fialofana, tsy misy akony,
Ny fiainana dia mahazatra ny renirano, tsy dia hafahafa.
Indray tolakandro anefa dia nijanona tampoka ilay sambo
Eo amoron’ny renirano fotsy dia mifofofofo ny rivotra.
Mamangy ny mpanjifa fa tsy tonga ny fony
Naneno ny mpanjaka mampalahelo tao anaty rano.
Mandefa ny antson’ny Gypsy ny tolakandro
Niverina nivoy mangina teo amin’ny renirano ny vahiny.
Miitatra hatrany amin’ny tendrombohitra sy renirano ny tendrombohitra sy renirano
Manidina avy hatrany any an-tsaha ve ny vanobe?
Misy milaza fa lavitra, lavitra i Hue
Saingy ao am-po ny tanànan’i Hue.
iraika ambin’ny folo taona nitondrana an’i Hue niaraka tamiko
Mandalo avo, manala ny aloka ny masoandro
Ny feon’ny tafo dia manosika ny rahona sy ny tendrombohitra
Ilay lehilahy mangatsiatsiaka ao amin’ny Reniranon’ny Perfume dia mitety an-tampon’ny lalana
Nihaona tamin’olona maro avy lavitra an’i Hue aho
Ny jiron’ny alina dia mijanona ary lasa adala
Sokafy ny lalana mankany amin’ny fanafahana miverina amin’ny tanindrazany
Manorina manerana ny tendrombohitra sy ny renirano, ny aloky ny manodidina
Firy ny olona Hue tsy miverina?
Mandefa vato manamorona ny ala handika ny fandresena
Misy fasan’ny maritiora manandratra ny tany.
Nandeha sambo hamakivaky an’i Tam Giang, nitsoka ny tranom-borona ny rivotra.
Feno alokaloka an-jatony taona maro an’ny trano mimanda fahiny
Impiry ny rà mena no nolokoana varahina maitso?
Nampalahelo sy voarara ny saina kintana tamin’io andro io
Mihetsiketsika ny renirano ary mihodina ny tendrombohitra
Ohatrinona no voangona, voaangona amin’ny alalan’ny
Hue Malahelo anao lalina aho
Isaky ny mamelana ny phoenix dia mihovotrovotra mena
Arakaraka ny hanentananao ny lasopy no vao mainka maneno ny akoho.
Tompo ô, inona no hitako
Aloka tsy nahy tamin’ny kapoka swan.
Na teny tafahoatra amin’ny feo lalina
Mba hanadino ny nostalgia ny andro teo aloha
Tompovaviko! Tsy andriko ny hahita anao
Ny fijery tsy miangatra amin’ilay endrika mahagaga.
Mba hamitaka ahy amin’ny hatsaran-tarehinao mistery
Fa tamin’izany andro izany dia nangina ny foko
Tompovaviko! loko tsara tarehy,
Aiza no ahitanao ny hakanton’ny voninkazo;
Ny fijery fototra amin’ny loko matevina
Fa tianay ny ho tsinontsinona sy tsy misy tsirony.
Tena ratsy! Hey ramatoa! ratsy fanahy aho!
Satria tiako loatra izy ka tsy ampy hatsaran-tarehy lohataona
Ary manjavona foana ny lokon’Andriamanitra
Saingy minitra maro no adinontsika ny lanitra sy ny tany.
Satria, ry zazavavy, te handainga aho
Fa aiza ny tadin’ny valindrihana?
Ireo endri-javatra mahazatra mifamatotra, fa miandrandra fampiononana.
Proteinina ao amin’ny sekolin’i Jiang Shui,
Tia mpandeha ny mpandeha.
Fitiavana sy fankahalana,
Ny tany tsy misy tany indrindra.
Inona no ratsy noho ny hariva,
Ny aloky ny malalako tsy hitako.
Manonofy aho, miandry ny fiantsoan’ny tafika fitiavana,
Sorena noho ny feon’ny crickets mikiakiaka.
Ny crickets dia nitsambikina tamin’ny faravodilanitra,
Tia anao, niantso aho fa tsy nandeha ny teny.
Lafiny inona no andrasanao?
Tsy niverina anefa izy tamin’ny volana lasa.
Nanerana ny ambanivohitra ny orana tamin’ny volana lasa,
Tsy mitantana enta-mavesatra aho.
Ento any amin’ny seranana aho hihemotra,
Mankarary ahy ny mijery ny sambo.
READ Bài Thơ Chú Cuội Ngồi Gốc Cây đa | Anybook.vn
Ny lay fotsy dia mamafa an’arivony,
Flicker rehefa misy rehefa miafina ao anaty zavona.
Ny samboko manaraka ny ranon’ny Reniranon’ny ranomanitra,
Very tany anaty ahitra poplar dia niverina aho.
Miverina ao anatin’ny haizin’ny alina aho,
Miparitaka amin’ny lafiny roa amin’ny hazavana.
Tany amin’ny faran’ny manodidina, dia nandre ny vadiko aho naneso ny vadiny,
irery ny tranoko.
Mamindra moto irery aho,
Mitsoka eo am-baravarana ny rivotra, manonofy ny fiverenany izy.
Nirotsaka be ny orana teo ivelan’ny veranda,
Mampalahelo ny mamihina ondana mangatsiaka, nasiako takolaka mavokely.
Ary dia lasa io alina io, lasa alina iray hafa,
Firy ny alina mangina tamin’iny alina iny.
Eo am-baravaran’ny volana, milatsaka mangatsiaka ny ando,
Ampahatsiahivo foana aho na lavitry ny trano aho…
Mitadiava dian’ny voninkazo tranainy eo afovoan’ny saha.
Vary feno landihazo ihany no azon’ny ankilako.
Mihantona sy miforitra ny landy an-danitra
Andao hiaraka amin’ny fifandraisako efa voalahatra amin’ny… ny fanjakan’ny tsinontsinona!
Ny sekolin-tanànako dia eo akaikin’ny trano iombonana
Sekoly kilasy telo tsara tarehy
Misy hazo paiso lehibe vitsivitsy manoloana ny sekoly
Matetika no mambabo ahy amin’ny fihetseham-po.
Ny anoloan’ny sekoliko dia tazana ny renirano
Ary ny ilany aoriana mijery ny saha
Teo amin’io lafiny io, dia matetika no nanontany ny torolalana ny mpampianatra ahy
Nataoko manodidina ny tanako: Eny, ny Atsinanana.
Fohy sy lava ny mpampianatra ahy
Maso manjelanjelatra miaraka amin’ny takolany paiso
Volo olioly, saokany somary manify
Matetika ny fihomehezana dia mifangaro amin’ny faniriana.
Taorian’ny telo taona tao amin’ny sekolin’ny tanàna
Tsapako fa nisokatra ny foko
Fantatro ny omby: biby fiompy
Ary minoa fa midadasika ny lanitra sy ny tany.
Niala nianatra aho tamin’ity taona ity
Mavesatra ny fahatsiarovana ny foko
Andro fararano mampalahelo sy manjombona
Nanakoako tao ambadiky ny dobo ny amponga sekoly.
Tongava maraina be masoandro
Mandro ao anaty ala mihorohoro eo ambanin’ny ando maraina.
Avy eo, eo afovoan’ny hazo an’arivony, dia mianjera ny riandrano
Misy ankizivavy milomano miboridana.
Ireo vehivavy mikasa volamena eo amin’ny riandrano
Eo afovoan’ny elefanta mierona, ny rivotra midradradradra, ary ny tigra miery lavitra
Ary eo anivon’ny fanahy an’arivony, ny ala midadasika
Ny andiana python dia mikaroka haza amin’ny rano volafotsy.
Manozongozona ny ranomandry ny rano, toy ny mpamadika mamo
Mihaza anao amin’ny sisin’ny vato fasika maitso,
Miondrika ary tariho manodidina ny tendrombohitra
Ny rà nandriaka nandoko ny mena manify!
Mandritra izany fotoana izany dia mamirapiratra ny seza fiandrianana volamena
Ny lafiny efatra amin’ny lanitra dia mamirapiratra amin’ny famirapiratana metaly
Fety alina ao amin’ny lapan’ny ditin-kazo manitra
Tovovavy an’arivony feno volamena mamirapiratra…
Na zatovovavy mitondra zaza amin’ny lamosiny mavesatra
Fasika volamena eo akaikin’ny tendrombohitra mikitoantoana
Rehefa nahita an’ilay volamena nitsinkafona izy, dia nanaraka tamim-pifaliana
Nianjera tsy nahy, nianjera ilay zaza, mahitsy ny riandrano.
Nikoropaka izy ka nanenjika volamena ilay bibidia
Dia mijoro ny tongotra mavo, ny vortex tsy miala
Niondrika naka an’io izy, ka nianjera tampoka: anaka a!
Ny rano no mitondra ny reny miaraka amin’ny zaza, ny riandrano mikoriana.
Mandritra izany fotoana izany dia mamirapiratra ny seza fiandrianana volamena.
Mamirapiratra miaraka amin’ny hazavana volamena ireo lalana efatra.
Fety amin’ny alina ao amin’ny lapan’ny ditin-kazo manitra
Ambonin’izany, ny uct.edu.vn dia nanokana ho anao fitambarana tononkalo malaza nataon’ny poeta Thanh Tinh. Miditra lalina ao anatin’ny fanahin’ny mpamaky hatrany ireo tononkalo ireo. Miaraka amin’ny dikany sy ny fihetseham-po manankarena, maro amin’ireo tononkalony no napetraka ho mozika ary tian’ny tanora maro sy deraina. Araho izahay mba hahafahanao manavao lahatsoratra manokana bebe kokoa! Fitiavana !
Previous: Phát triển bản thân là gì? Là phiên bản tốt hơn của ngày hôm qua | Anybook.vn
Next: Ngày đáo hạn phái sinh là gì? ĐHPS ảnh hướng tới Thị trường như thế nào? – ECCthai | Anybook.vn